Cabdulqaadir Diiriye – Wargeyska Waxgarad
Home / Cabdulqaadir Diiriye
September 17, 2018	Kobcinta Nafta, Waxbarasho 1
Waxbarashadu ma aha oo keliya tan rasmiga ah ee ardayda la geeyo xarun ay aqoonta ka bartaan. Waxaa in badan dadku wax ka bartaan inay dareenkooda ku gartaan waxyaabaha ka dhacaya degaanka ku hareeraysan ama dadka la nool kaga daydaan dhaqanka iyo dhawaaqa afka. Ummadaha maanta nool waxay u bateen …
Abuuridda iyo Gudbinta Aqoonta
May 31, 2018	Waxbarasho 0
Ilmuhu waxay jecel yihiin in ay guriga wax walba oo yaal taabtaan, dhadhamiyaan oo dhulka la dhacaan si ay u ogaadaan inuu jabayo iyo siduu u jabayo. Taasi waa habka ay wax ku bartaan. Qofka weyni wixii ku cusub wuxuu ku qiyaasaa wax uu hore u yaqaannay, laakiin ilmuhu wax …